ရွှီးဖြန်းတဲ့ ဘာဆာ ? ၊ ယူနိုက်တက် ကို မရွေးတဲ့ လူငယ်လေး ၊ တပည့်ဟောင်းကို ထပ်ချိတ်ပြန်တဲ့ မော်ရင်ဟို ၊ မထူးသေးတဲ့ ဂျေဇု အခြေအနေတို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ရွှီးဖြန်းတဲ့ ဘာဆာ ? ၊ ယူနိုက်တက် ကို မရွေးတဲ့ လူငယ်လေး ၊ တပည့်ဟောင်းကို ထပ်ချိတ်ပြန်တဲ့ မော်ရင်ဟို ၊ မထူးသေးတဲ့ ဂျေဇု အခြေအနေတို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ဘာစီလိုနာ အသင်း ဒါရိုက်တာဟောင်း တိုနီ ဖရီရှာ က လက်ရှိ ဥက္ကဌ လာပေါ်တာ ဟာ ပရိသတ်တွေကို ရွှီးဖြန်း နေတာ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေနဲ့ လီဝန်ဒေါ့စကီး ၊ ဘာနာဒိုဆေးလ်ဗား ၊ ရာဖင်ညာ ၊ ဂျူးလ် ကွန်ဒေး တို့လို ကစားသမားတွေကို ခေါ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဝေဖန် ပြောဆို သွားခဲ့ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး မှာ နေရာပျောက် နေတဲ့ စပိန် ဂိုးသမား ကီပါ အရစ်ဇာဘလာဟာ ကို ပြင်သစ် ကလပ် နိုက်စ် အသင်းက အငှားနဲ့ ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား နေပြီး ကီပါ ကလည်း ပွဲကစားခွင့် အတွက် စတမ်းဖိုဒ့် ဘရစ် ကို စွန့်ခွာဖွယ် ရှိတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ရီးရဲမက်ဒရစ် နဲ့ စာချုပ် ၁ နှစ်သာ ကျန်တော့တဲ့ မာကို အဆန်ဆီရို ဟာ အီတလီ စီးရီးအေ ကလပ် အေစီမီလန် အသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့နိုင်တဲ့ အလားအလာ ရှိတယ်လို့လည်း သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး အသင်းကတော့ အိုင်ယက်စ် က ခေါ်ယူလိုတဲ့ နယ်သာလန် တောင်ပံ ကစားသမား စတီဗင် ဘာ့ဂျ်ဝိုင်း အတွက် ပေါင် သန်း ၂၀ သတ်မှတ် လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ် ။
အိုင်ယက်စ် တိုက်စစ်မှူး ဆီဘတ်စတီယန် ဟေလာ ကတော့ ဒေါ့မွန် အသင်းဆီကို ပြောင်းရွှေ့ ရောက်ရှိ တော့မှာ ဖြစ်ပြီး
ရီးရဲကို ပြောင်းလာတဲ့ ချဲလ်ဆီး နောက်လူ ရူဒီဂါ က မက်တီယို ကိုဗာဆစ် ဟာ သူ့ကို ရီးရဲ မက်ဒရစ် ကို သွားရောက် ကစားဖို့ အကြံပြု တိုက်တွန်း ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီနှစ် နွေရာသီမှာ ကစားသမားတွေ တယောက်မှ မခေါ်နိုင်သေးဘဲ အပြိုင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေ မှာလည်း အသာစီး မရ ဖြစ်နေတဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ နောက်ထပ် ပစ်မှတ် တခုကို လက်လွှတ် ခဲ့ရ ပြန်ပါပြီ ။
ပဲလေ့စ် နဲ့ အပြိုင် ချိတ်ဆက် နေတဲ့ ဒါဘီ ကောင်တီ ကစားသမား မယ်လ်ကွမ် အီဘိုင်ယိုဝီ ဟာ မန်ယူနိုက်တက် အစား လန်ဒန် ကလပ် ကို ရွေးချယ် ခဲ့ကာ ပဲလေ့စ် အသင်းနဲ့ ၅ နှစ် စာချုပ် ချုပ်ဆိုဖို့ အတွက် ဆေးစစ်မှုပင် ပြုလုပ် ပြီးစီး သွားခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး အသင်းဟာ လီဗာပူး ကနေ ထွက်ခွာ လာတဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ ဂုရု မိုက်ကယ် အက်ဒွပ် ကို ခေါ်ယူဖို့ စဉ်းစား နေပြီး မန်ယူနိုက်တက် ကလည်း အက်ဒွပ် ကို စိတ်ဝင်စားမှု ရှိနေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ကမ္ဘာ့ဖလား အိမ်ရှင် ကာတာ အသင်းဟာ အိုင်ယာလန် မြောက်ပိုင်း အခြေစိုက် ကလပ် အသင်းလေး တသင်း နဲ့ ခြေစမ်း ကစားရာမှာ ၁-၀ နဲ့ ရှုံးနိမ့် သွားခဲ့တာကြောင့် ဝိုင်းဝန်း ဝေဖန်မှုတွေ နဲ့ ရင်ဆိုင် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး တိုက်စစ်မှူး ဟယ်ရီကိန်း ကတော့ သူ နှစ်စဉ် စပွန်ဆာ ပေးနေကျ လိဂ်တူး ကလပ် လေတန် အိုးရီးရင့် အသင်းရဲ့ ဂျာစီ စပွန်ဆာ ကို ၃ နှစ်ဆက်တိုက် အဖြစ် ဒီနှစ် ရာသီမှာလည်း ဆက်လက် ပေးသွားမယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ပြင်သစ် လက်ရွေးစင် နည်းပြ ရာထူးကို စိတ်ဝင်စား နေတယ်ဆိုတဲ့ ဇီနဒင် ဇီဒန်း က သူဟာ တနေ့မှာ PSG နည်းပြ ဖြစ်လာနိုင်သလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မငြင်းဆန် ခဲ့ဘဲ “Never say never” လို့ ပြန်ဖြေသွားခဲ့တယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
လိဒ်ယူနိုက်တက် ဟာ ရာဖင်ညာ ထွက်ခွာ နိုင်ချေ ရှိမှု အတွက် ပြင်ဆင် နေပြီး ကလပ် ဘရုဂျက် ကစားသမား ချားလ် ဒီ ကိတ်လယ်ရီ ကို စောင့်ကြည့် နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
၂၁ နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမားလေးကို အေစီမီလန် အသင်း ကလည်း စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် ကို ပြောင်းလာမယ့် ပေါလ် ပေါ့ဘာရဲ့ အေးဂျင့်ဟာ မနက်ဖြန် မှာ အသင်း တာဝန်ရှိသူတွေ နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး စာချုပ် ကိစ္စတွေ ၊ ဆေးစစ်မှု ကိစ္စတွေ အွက် ပြောဆို ဆွေးနွေး ကြမယ်လို့ သိရပါတယ် ။
မန်စီးတီး နဲ့ အာဆင်နယ် တို့ ဟာ တိုက်စစ်မှူး ဂါဘရီရယ် ဂျေဆု အတွက် ဆက်လက် ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ် နေပြီး အပြောင်းအရွှေ့ ဖြစ်မြောက်ဖို့ အတွက် လိုအပ်မှုတွေ ရှိနေသေးတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
မနှစ်က တူရကီ ကို အငှားထွက် ကစားပြီး ဘာစီလိုနာ ကို ပြန်ရောက်လာတဲ့ ဘော့စနီးယား ကွင်းလယ်လူ ပီယာနစ် ကို နည်းပြ ဇာဗီ က ပြန်ရောင်းထုတ်ဖို့ စိတ်ကူးနေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် မာဆေး အသင်းနဲ့ ထွက်ပေါ် လာတဲ့ သတင်းတွေ ကတော့ အမှန်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ။
ဘင်ဖီကာ ဟာ ရေးဗားပလိတ် အသင်း ကစားသမား အန်ဇို ဖာနန်ဒက်စ် ကို ခေါ်ယူဖို့ မူအားဖြင့် သဘောတူညီမှု ရယူနိုင်ခဲ့ပြီ လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဂျာမန် ကလပ် ဟာသာဘာလင် မှာ ကစားနေတဲ့ ကီဗင် ပရင့်စ် ဘိုတန် ကတော့ အသင်းနဲ့ နောက်ထပ် ၁ နှစ် စာချုပ် သက်တမ်း တိုးလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ် ။
PSG အသင်းဟာ အင်တာ နောက်ခံလူ မီလန် စကရီနီယာ အတွက် ဆက်လက် ကြိုးပမ်း နေပြီး ယူရို သန်း ၆၀ + အပိုဆုကြေး တို့နဲ့ ခေါ်ယူ နိုင်ဖို့ အလားအလာ များပြား နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ဗလင်စီယာ အသင်းဟာ ပေါ်တူဂီ တောင်ပံ ကစားသမား ဂွန်ကာလို ဂွီဒက်စ် အတွက် ရိုးမား ရဲ့ ယူရို သန်း ၂၀ + ကားလက်စ် ပီရက်ဇ် ကမ်းလှမ်းမှု ကို ပယ်ချ ခဲ့တယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
မော်ရင်ဟို ရဲ့ ရိုးမား ဟာ ရီးရဲ မက်ဒရစ် နောက်ခံလူ နာချို ဂွန်ဇာလက် ကိုလည်း ချိတ်ဆက် နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ မော်ရင်ဟို ဟာ နာချို ကို ရီးရဲ အကယ်ဒမီ ကနေ စီနီယာ အသင်းကြီးမှာ ပွဲထုတ်ပေးခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
ဆီဗီးလား ဟာ စကော့တလန် ကလပ် ရိန်းဂျားစ် အသင်း ကစားသမား အယ်လ်ဖရက်ဒို မိုရီလို အတွက် ကမ်းလှမ်းမှု စတင် ပြုလုပ် လိုက်တယ်လို့လည်း သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ရီးရဲမက်ဒရစ် အသင်းဟာ ကလပ် ကမ္ဘာ့ဖလား ကျင်းပမယ့် အချိန်ကာလ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကမ္ဘာ့ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဖီဖာ ဆီက ပွဲချိန် ထုတ်ပြန်မှုကို စောင့်ဆိုင်း နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။ ဒီနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲ ကို နိုဝင်ဘာ ကနေ ဒီဇင်ဘာ အတွင်း ကျင်းပမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ကလပ် အသင်း ပြိုင်ပွဲချိန်တွေ ရွှေ့ပြောင်းရမှု ရှိလာခဲ့ ပါတယ် ။
ရီးရဲမက်ဒရစ် နဲ့ မန်ချက်စတာ စီးတီး အသင်းတွေမှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဂျာဗီ ဂါစီယာ ကတော့ အသက် ၃၅ နှစ် အရွယ်မှာ ဘောလုံး သမား ဘ၀ ကနေ အနားယူခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ကြေညာ သွားခဲ့ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . . . . ။
Previous Article လီဗာပူး ပရိသတ်တွေ ကို နှုတ်ဆက်သွားတဲ့ ဆာဒီယို မာနေး ရဲ့ အင်တာဗျူး
Next Article ယူနိုက်တက် ပစ်မှတ်ကို နေမာ ၊ ဗင်နီးရှပ် တို့နဲ့ ခိုင်းနှိုင်းလိုက်တဲ့ ဘရာဇီး နည်းပြ တီတေး